हरिण ठानेर घाँसको भारी बोकेर घर फर्किंदै गरेकी महिलालाई लाग्यो गो’ली - Prateek Nepal
हरिण ठानेर घाँसको भारी बोकेर घर फर्किंदै गरेकी महिलालाई लाग्यो गो’ली
काठमाडौ । रोल्पामा वनबाट घाँसको भारी बोकेर घर फर्किंदै गरेकी एक महिलाई गो’ली ला’गेको छ । उनको अवस्था ग’म्भिर रहेको र उपचारको क्रममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घ’टनामा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले एक जनालाई प’क्राउ गरेको छ ।
रोल्पा नगरपालिमा वडा नम्बर ९ फाल्जाकी ४५ वर्षीया बरु पुनको अवस्था ग’म्भिर रहेकाले उनको उपचार जारी रहेको हो । सोमबार बेलुका वनमा बाख्रा चराएर घाँसको भारी बोकेर घर फर्कदै गरेकी बरु माथि घ’टना भएको थियो ।
घ’टना गराउने स्थानीय ३७ वर्षीय हस्तबहादुर पुनलाई प्रहरीले प’क्राउ गरेको छ । रोल्पाका जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी नरेशराज सुवेदीका अनुसार बरुको टाउकोको गि’दी नै बाहिर निसकिेको छ ।
जिल्ला अस्पताल रेउघाले उनलाई थप उपचारका लागि मंगलवार भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचार रेफर गरेको छ । प’क्राउ परेका पुनले हरिणले गहुँबाली खाएर स्वाहा पार्न थालेपछि हरिणका लागि आफुले त्यस्तो गरेको बताएका छन् ।
साँझको बेलामा घाँसको भारी बोकेर आउँदै गरेको महिलालाई आफुले हरिण जस्तै देखेको बताएका छन् । प्रहरीका अनुसार घ’टना सोमबार बेलुका साढे ७ बजेतिरको हो।
प्रहरी समक्ष पुनले भनेका छन् ‘म हरिणबाट आजिद थिएँ, झिसमिसे साँझ भएको हुँदा लुकेर बसेको मैले हरिण नै आयो कि भनेर त्यस्तो गल्ती गरे। घ’टनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ । प्रतिकात्मक तस्बिर
ओलीलाई संविधान सिध्याउन नदिन जनतालाई सडकमा उत्रन अपील
व्यापारीका दु:खदायी गु’नासो ! ‘बजारमा हिँड्नेको घुइचो पनि समान किन्ने बढेनन्’ !
‘ग’ल्ती बोलेँ, क्षमा चाहन्छु’- हुम्लाका सहायक प्रजिअ
नेकपाभित्र खैलाबैला म’च्चियो !! प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पाटि फु’टाउन पस्ताव